Yile ndlela yenziwa ngayo iDracula, oyena mntu woyikisayo kuncwadi. | Uncwadi lwangoku
UAna Lena Rivera Muñiz | | Uloyiko
ILondon, isixeko esineThala leencwadi eliphembelela ukwenziwa kweDracula.
La Ithala leencwadi laseLondon utyhile kule veki into enomdla malunga nendlela ekwenziwe uphando ngayo kwaye yabhalwa Dracula. Iincwadi ezingama-26 zanceda uBram Stoker wenza iDracula omnye wabalinganiswa abadumileyo kuncwadi.
UFilipu waqhekeza, UMlawuli woPhuhliso lweThala leencwadi laseLondon, waqala uphando lwakho nengqokelela ye Amanqaku eStoker yafunyanwa ngo-1913. Amakhulu ekubhekiswa kuwo kwimigca nganye kunye namabinzana asuka kwiincwadi uStoker abonwa efanelekile ekwenzeni iDracula ebomini afakiwe kumanqaku adwelisiweyo.
Ithala leencwadi lineekopi zokuqala ezingama-25 zezi ncwadi, apho Kufunyenwe amanqaku ahambelana nezalathiso kwincwadi yamanqaku kaStoker.
'U-Bram Stoker wayelilungu leThala leeNcwadi laseLondon, kodwa ukuza kuthi ga ngoku asikabinaso isalathiso sendlela ayisebenzise ngayo ingqokelela yethu. Ukufunyanwa kwanamhlanje kusivumela ukuba siqinisekise, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba Iincwadi ezininzi ezisemashalofini ethu ziyafana nezo wayezisebenzisa ukunceda ukubhala nokuphanda ngobugcisa bakhe.
Amanqaku afunyenwe aqukethe iminqamlezo, ukrwela umgca phantsi, amaphepha asongiweyo, kunye nemiyalelo yokukopa onke amacandelo.
Iincwadi eziphawulwe kakhulu nguEl incwadi yewolves NguSabine Baring-Gould kunye Ubhubhane wePseudodoxic nguThomas Browne.
I-Whitby Abbey yayisesinye sezakhelo ezaphefumlela uBram Stoker ukwenza iDracula.
UStoker wayeliqabane kwiLayibrari yaseLondon kangangeminyaka esixhenxe, ezihambelana nexesha awayesebenza ngalo kwiDracula, ukusuka 1890 i1897, unyaka eyapapashwa ngawo Dracula.
UNjingalwazi uNick Groom weDyunivesithi yase-Exeter uvakalise ukwamkelwa kunye nomdla wokufunyanwa kukaSpedding:
“Oku kukufumanisa okumnandi kakhulu. Ndiziphicothile iincwadi kunye nezichazi-magama zabo noPhilip Spedding ndaza ndazithelekisa namanqaku kaBram Stoker. Andithandabuzi ukuba uBram Stoker uzisebenzisile ezi kopi Dracula, incwadi emthathe iminyaka esixhenxe ukuba ayibhale. Babonisa ukuba iLayibrari yaseLondon yayiyinto ebethelelwa kuyo yenye yezona noveli zinempembelelo kwimbali yehlabathi.
UFilipu Marshall, UMlawuli weThala leeNcwadi laseLondon, ukhuthaza ababhali ukuba basebenzise ithala leencwadi ukwenza umsebenzi wamaxwebhu kwimisebenzi yabo:
"Siyathemba ukuba uninzi lwababhali abanomdla bazakulandela ukukhokelwa nguBram Stoker kwaye basebenzise iLayibrari yaseLondon ngenkuthazo kunye nenkxaso ekudaleni ubugcisa babo."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Uloyiko » UDracula, oyena mntu woyikisayo kuncwadi, uphefumlelwe ziincwadi ezingama-26.
I-Biography kunye neencwadi ezilungileyo zikaCharles Dickens